Nahazo ordinatera 20 avy amin’ny ambasadin’i Korea Atsimo - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Tonga nanolotra ordinatera 20 ho an’ny Federasiona skotisma malagasy ny ambasadaoron’i Korea Atsimo. Tao amin’ny foiben’ny Kiadin’i Madagasikara no nanolorana izany fanomezana izany.
“Izao fotoana izao dia tohin’ny fiaraha-miasa teo amin’ny skoto malagasy sy ny skoto koreanina” hoy Agostino filohan’ny Antilin’i Madagasikara ary isan’ny mpiandraikitra ny Federasiona skotisma malagasy. Notsiahiviny fa tonga namangy teto ny skoto koreanina tamin’ny volana febroary taona 2017 ity. “Ny 21 sy 22 febroary 2017 teo no namangy teto ny iraky ny skoto koreanina. Tena zava-dehibe izany famangiana izany satria dia ny 22 febroary no fankalazana ny daty nahaterahan’i Baden Powell. Izy no namorona ny skotisma” hoy ity filoha skoto ity. Nomarihina fa tonga teto ireo skoto koreanina ireo hamangy ary hanentana ny skoto malagasy hanohana ny fangatahan’i Korea Atsimo handray ny Jamboree 2023. Fantatra tamin’ny volana aogositra teo fa i Korea Atsimo no handray io fotoan-dehibe ho an’ny fiainan’ny skoto io. Maharitra 12 andro ny jamboree iray. Isaky ny efa-taona no tontosaina ny jamboree iray ary Etazonia no firenena nampiantrano ny Jamboree farany tamin’ny taona 2019.
Nandritra ny fitsidihana nataon’ireo skoto koreanina ireo dia nisy ny fanapahan-kevitra fa hiara-hiasa ny Korean Scout Association sy ny Federasiona skotisma malagasy. Isan’ny fanambin’ny skoto maneran-tany ny hahatratra ny isa 100 tapitrisa ny mpikambana anatin’ny fikambanana skoto maneran-tany. Fanamby goavana.
Nahita ny zava-misy taty Madagasikara ireo skoto koreanina ireo. Nampanantena fiaraha-miasa ary koa nilaza fa hanohana ny federasiona skoto malagasy amin’ny asa sahaniny. “Ireto fitaovana ireto dia vokatr’izany fampanantenana nomena anay izany” hoy Agostino. Ny firenena koreanina mihitsy no nihetsika naneho ny fanohanana ny skoto malagasy. Ordinatera 20 no natolotry ny ambasadaoro koreanina ho an’ny federasiona skoto malagasy. Ho zaraina amin’ny fikambanana 5 mamondrona ny federasiona skotisma malagasy ireo fitaovana ireo. “Tily eto Madagasikara, Antilin’i Madagasikara, Mpanazava eto Madagasikara, Fanilon’i Madagasikara ary Kiadin’i Madagasikara” ireo no fikambanana skoto dimy mandrafitra ny Federasiona skotisma malagasy. “Draw your dream” io no teny fanevan’ny skoto koreanina raha nanao fampielezan-kevitra handray ny Jamboree izy ireo. Ha afaka hanao izany tokoa ny skoto malagasy.